Bangladesh, ilay iharan'ny COVID manaraka, dia mampiato ny sidina iraisam-pirenena rehetra
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Bangladesh » Bangladesh, ilay iharan'ny COVID manaraka, dia mampiato ny sidina iraisam-pirenena rehetra
Ny manampahefana sivily misahana ny fiaramanidina sivily ao Bangladesh dia nampiato ny fiasan'ny sidina iraisam-pirenena 500 eo ho eo, kasaina hiasa mankany sy avy any Dhaka afaka herinandro amin'ny 14 aprily.
Bangladesy no firenena farany nampiato ny serivisy fitaterana an'habakabaka iraisampirenena noho ny areti-mandringana COVID-19. Ny fampiatoana mandritra ny herinandro ny sidina mpandeha iraisampirenena rehetra mankany sy avy any Bangladesh dia hanomboka amin'ny 14 aprily
Raha ny filazan'ny boriborintany iray androany hariva, Fahefana avaratry ny sidina sivily ao Bangladesh (CAAB) nilaza fa hanan-kery ny fampiatoana manomboka amin'ny 12:01 maraina (Time Standard Bangladesh) amin'ny 14 aprily ary hitohy hatramin'ny 12:59 alina BST amin'ny 20 aprily.
Ny manampahefana sivily misahana ny fiaramanidina ao Bangladesh dia nampiato ny fiasan'ny sidina iraisam-pirenena 500 eo ho eo, kasaina hiasa mankany sy avy any Dhaka ao anatin'ny herinandro ny 14 aprily.
Ny Medevac, ny maha-olona, ​​ny fanampiana, ny entana, ny fipetrahana ara-teknika ho an'ny famahanana solika ihany ary ny sidina nodiovina tamin'ny fandinihana manokana dia tsy ho eo am-pelatanan'ity fampiatoana ity, hoy ny CAAB.
Ny mpitondra dia afaka mitondra mpandeha 260 be indrindra amin'ny fiaramanidina malalaka raha mpandeha 140 kosa avela hisidina amin'ny vatan'ny tery tery amin'ireo sidina voalaza etsy ambony.
Na inona na inona vaksiny COVID-19 ary raha tsy hoe miala sasatra ny tompon'andraikitra mahefa, ny mpandeha rehetra tonga na miala ao Bangladesh amin'ny sidina voalaza etsy ambony dia hanana taratasy fanamarinana ratsy COVID-19 miorina amin'ny PCR.
Ny fitsapana PCR dia hatao ao anatin'ny 72 ora aorian'ny ora fiaingan'ny sidina.
Ireo mpandeha tonga amin'ny sidina dia voadio amin'ny fiheverana manokana dia tsy maintsy mameno tanteraka ny quarantine andrana mandritra ny 14 andro any amin'ireo toerana natolotry ny governemanta na any amin'ny hotely izay andaniam-bolan'ny mpandeha.
Seychelles fizahan-tany fizahantany dia namoaka sehatra dizitaly fizahan-tany vaovao
VIA Rail dia mamerina ny ampahany any Toronto-Winnipeg an'ny Kanadiana